Vagadziri veBritish Standard Vagadziri - China British Standard Factory & Suppliers
IBritish Standard BS1D Series
BS1D nhepfenyuro yeBritish yakajairika switch uye socket, mutsva wenyaya yakagadziriswa ne TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Hwemhando yepamusoro uye neEC, BS, GCC certification, waranti ndeye makore gumi Nyowani nyowani dhizaini yeImberi yekumberi iyo isina chimiro chimiro. Iyo yekumberi kweplate iyi yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvinhu. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket yakagadzirwa ne phosphor bronze, iyo ...
IBritish Standard BS1C Series
BS1C yakateerana yeBritish standard standard switch uye socket, mutsva unotevedzwa wakagadziriswa ne TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Hwemhando yepamusoro uye neEC, BS, GCC certification, waranti ndeye makore gumi Iyo yekumberi yeiyi nhepfenyuro yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvigadzirwa uye Zinc Metal. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket yakagadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro chemagetsi chakanaka chinoita ...
IBritish Standard BS1B Series
BS1B yakatevedzana British standard switch uye socket, mutsva unotevedzwa wakagadziriswa ne TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Hwemhando yepamusoro uye neEC, BS, GCC certification, waranti ndeye makore gumi Iyo yekumberi kwemaeki iyi yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvinhu uye Girazi rakatsamwa. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket yakagadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro chemagetsi yakanaka conduct ...
IBritish Standard BS1A Series
BS1A yakateerana yeBritish standard standard switch uye socket, mutsva unotevedzwa wakagadziriswa ne TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Mhando yepamusoro uye neEC, BS, GCC certification, waranti ndeye makore gumi BS1A akateedzera switch uye socket ndeyekutanga nhepfenyuro itsva BS switch uye socket. Iyo yekumberi yakagadzirwa neiyo yepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvinhu. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket yakagadzirwa ne phosphor bronze, iyo iine ...
British standard switch uye socket, Yakakwira mhando, waranti ndeye makore masere Iyo yekumberi yeiyi nhepfenyuro yakagadzirwa nepamusoro giredhi stainless simbi zvinhu. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket inogadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro chemagetsi yakanaka conductor uye nekusingaperi elasticity. Iyo plug mune-off mabasa anopfuura mazana mazana matatu nemazana.
British standard switch uye socket, High mhando uye neEC, BS, GCC certification, waranti ndeye makore gumi Iyo yekumberi kweiyi nhepfenyuro yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvigadzirwa, kuiswa kwemukati kunoita kuti kuratidzika kuve kwakanyanya. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket inogadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro chemagetsi yakanaka conductor uye nekusingaperi elasticity. The ...
British standard switch uye socket, High mhando uye neEC, BS, GCC certification, waranti ndeye makore gumi Iyo yekumberi yekutevedzana iyi yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvinhu. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket inogadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro chemagetsi yakanaka conductor uye nekusingaperi elasticity. Iyo plug mune-off mabasa anopfuura mazana mazana matatu nemazana.